कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक दिन तोकियो - Kantipath.com
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक दिन तोकियो
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको कक्षा १२ को परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने मिति तय गरेको । बोर्डले २०७६ बैशाख १५ गतेदेखि २६ गतेसम्म संचालित कक्षा १२ को नतिजा यहि साउन तेश्रो सातासम्म सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न केन्द्रमा सम्परिक्षणको काम धमाधम भैरहेको र चाडै डाटा इन्ट्री र रुजु गर्ने कामसमेत सुरु गरिएको छ ।
‘नतिजा तेश्रो साता वा नभए अन्तिम सातासम्म प्रकाशन गर्ने गरि काम गरिरहेका छौं” उनले भने । उनको अनुसार यसपटक पनि पहिलेको जस्तै सबै बिषयको नतिजा एकैपटक सार्वजनिक हुने छ ।
प्लस टु मा कुन ग्रेड ल्याउनेले के पढ्न पाउने ?
धेरै विद्यार्थीहरुले हालको प्लस टुको संरचनाको बारेमा अनबिज्ञ छन् । माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थामा भएको परिबर्तनपछी बिद्यार्थीरअभिभाबकको त कुरै छोडौ, कयौं शिक्षकहरु समेत यस बिषयमा एकदमै अन्योलमा परेका छन् । त्यसैले बिद्यार्थीले सोधिरहने प्रश्न लिएर हामी केहि दिन अगाडी मात्र सानोठिमी स्थित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालयमा पुगेका थियौं । त्यहाँ पुगेर हामीले सोधेका प्रश्न र तिनका उत्तरहरु तल दिइएको छ ।
डी प्लस भनेको पास हो कि फेल ?
ग्रेडिङ प्रणाली मा पास अथवा फेल भन्ने हुदैन । यस प्रणाली अनुसार १०० मा २ अङ्क ल्याउनेलाई समेत (भ्) ग्रेडमा सुचिकृत गरिन्छ । त्यसको अर्थ मिहिनेत पुगेनरएकदमै अपर्याप्त भन्ने हुन्छ तर फेल भनेर भनिदैन । त्यसैले जम्मा २ नम्बर ल्याउनेले पनि निर्धक्कका साथ स्नातक (ब्याचलर) तहमा भर्ना हुन पाइन्छ । तर कुनै कुनै बिषय जस्तै इन्जिनियरिङरमेडिकल पढ्न भने नपाइने हुन सक्छ । कुन ग्रेड ल्याउनेले के पढ्न पाउने भन्ने बिषयमा शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको न्यूनतम मापदण्ड अनुसार बिश्वबिद्धालयले भर्ना लिने गर्दछन् ।
यस्तो अवस्थामा मैले यदि परीक्षा दिइन भने भोली केहि अप्ठ्यारो पर्छ ?
अनि मैले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिएर पहिलेको भन्दा थोरै ग्रेड आयो भने कुन ग्रेड मान्य हुन्छ ?
अनि डी प्लस आएर फेरि परिक्षा नदिइ स्नातक (ब्याचलर) तहमा भर्ना गर्न पाइन्छ त ?
अहिले भौतिकशास्त्र (फिजिक्स) बिषयको क्रेडिट आवर ४.६९ छ भन्नुको मतलब यो बिषय पढाउन (४.६९ × ३२ .१५०) घन्टा लाग्छ भन्ने बुझिन्छ । कुनै पनि बिषयको क्रेडिट आवर १ छ भने सामान्यतय त्यसको अर्थ विद्यार्थीले त्यो बिषय हप्तामा ३ घन्टा (एक दिनमा ३० मिनेट) पढ्नुपर्छ भन्ने हुन्छ र २ छ भने हप्तामा ६ घन्टा (एक दिनमा ६० मिनेट) पढ्नुपर्ने हुन्छ । यसरी क्रेडिट आवरबाट बिषयको जटिलताको बारेमा जान्न सकिन्छ ।
उहादरणको लागिः त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयले यस अघि इन्जिनियरिङ संकायमा भर्ना हुनको लागि प्लस टु मा ४५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनु पर्ने प्राबधान राखेको थियो । ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार यो भनेको सी ग्रेड हुन आउँछ । त्यसैले औषतमा सी ग्रेड ल्याउनेले त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ संकायमा भर्ना हुन पाउने देखिन्छ ।
सोहि कुरा मेडिकल, बीएस्सी, बीबीए, कृषि, पशु, बागवानी, कानुन संकायमा नि लागू हुन्छ । केही बिषयहरु जस्तै मानबिकी, बीबीएस लगाएतका बिषयमा भने यसअघि प्लस टु पास हुने सबैले भर्ना गर्न पाइने प्राबधान भएकाले औसतमा डी ग्रेड ल्याउनेले पनि भर्ना हुन पाउने देखिन्छ ।
Previous Previous post: यौनसम्पर्कपछि यसरी हिड्छन् महिला
Next Next post: विश्वको सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्म बन्यो ‘एभेन्जर्सः इण्डगेम’